Maxkamad ku taalla Kenya oo sii deysay Saddex Qof oo loo haystay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab | Somali National Television - sntv.so
Home ARGAGIXISADA Maxkamad ku taalla Kenya oo sii deysay Saddex Qof oo loo haystay...
Maxkamad ku taalla Kenya oo sii deysay Saddex Qof oo loo haystay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab
Nairobi-(SNTV)-Maxkamad ku taalla Magaalada Nyeri, ee Dalka Kenya ayaa sii deysay Saddex Qof oo loo heystay in ay ka tirsanaayeen kooxdii weerarka ka geysatay dhismaha Dusit D2 Nairobi, bartamihii Bishii hore.
Abdul Kibiringi, James Mwai Mwangi iyo Habiba Geeddi Hunshur, ayaa Maanta oo Jimca ah xorriyooda dib u helay, markii ay Maxkamaddu sheegtay in ay laamaha ammaanku baaritaan ka dib ku waayeen dembiyadii lagu soo eedeeyay.
Maxkamadda ayaa caddeysay in qeybta Boliiska u qaabbilsan la dagaallanka argagixisadu ay xireen Gal-dacwadeedkii ka yiillay Dadka la fasaxay, laguna waayay tuhunkii ku aaddanaa in ay wax ka ogaayeen weerarkii ay Al-Shabaab ka geysatay Nairobi.
Kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ayaa 15-kii January ee Sanadkan weerar ku qaadday dhismaha Dusit D2, ee Magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku dhinteen inta la ogyahay 21 Qof.
Previous article24 Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Hiiraan
Next articleAkhriso: Madaxweynaha K/Galbeed oo magacaabay qaar kamid ah Golaha Wasiirada ee maamulkaasi